Somalia: 12 Qodob Oo Maamul Goboleedyada Soomaaliya Ka Dalbadeen Dawladda Dhexe Ee Muqdisho - Wargane News
Home Somali News Somalia: 12 Qodob Oo Maamul Goboleedyada Soomaaliya Ka Dalbadeen Dawladda Dhexe Ee...
Somalia: 12 Qodob Oo Maamul Goboleedyada Soomaaliya Ka Dalbadeen Dawladda Dhexe Ee Muqdisho
Guddida Golaha Aqalka Sare ee Dhex dhexaadinta Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda ayaa Ku dhawaaqay ay soo dhameeyeen dadaaladii lagu soo Afjaraayay Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda.
Dedejinta dhameystirka dastuurka federaalka.
Ka howlgelidda dhismaha ciidama qaranka iyo sugidda amniga.
Dhismaha guddiga garsoorka qaranka iyo dib u habeynta gatsoorka.
Ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka.
Ka heshiinta qaab dooarashada guud ee 2021-ka iyo dhismaha axsaabta.
Xoojinta nidaamka federaleynta, siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan.
Mideynta qorshaha qaranka sida wax qeybsig mashaariicda iyo dhaqaalaha, iyada oo dowladda dhexe ay yeelaneyso go’aaminta meelaha ku habon, ka hirgelinta kabeyaasha dhaqaalaha iyo bulsho heer qaran
Faragelin la’aanta doorashooyinka DXDF iyo kuwa dowladda dhexe
Qodobadda u gaarka ah Maamul Goboleedyada
Puntland: Taageeridda ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Puntland, dhinacyada mushaarooyinka, tababarrada iyo agabka.
Jubbaland: Taageeridda ciidamada Daraawiishta Jubbaland, tayeytooda iyo kala howlgalka Amniga Jubbaland.
Koonfur Galbeed: Kala shaqeynta Amniga, gaar ahaan wadadda isku xirta Muqdisho-Baydhabo.
Galmudug: La-dhisidda ciidanka maamulka Galamudug iyo xoreynta degaannada ay Al-shabaab heystaan.
Deg Deg: Gudoomiye Cirro Iyo Wafti Uu Hogaaminayo Oo Saaka Safar Kaga Jarmaaday Magaalada Hargeysa+Halka Ay Usii Jeedaan Iyo Ujeedada Socdaalkooda